Ose | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ndepụta ụdị ose dị ọkụ na-eto eto n'ụlọ
Achịcha na-eme nke ọma nwere ike itolite ọ bụghị naanị n'ogige, kamakwa n'ụlọ, na ite. N'ihi ya, ị na-enweta ihe ụtọ na ose na osisi mara mma. Taa, enwere ụdị iche iche dị iche iche dị n'ime ụlọ, ma anyị ga-atụle ụdị ose dị ọkụ na-atọ ụtọ na nke mara mma maka ịkụ ihe na windowsill.
Kedu ihe bara uru ose na-acha akwụkwọ ndụ?
Green Bulgarian ose (unripe sweet ose) bụ mkpụrụ nke afọ herbaceous kwa afọ nke ezinụlọ Solanaceae. E kesara ya ma kụọ ya na Ukraine, Russia, Italy, Romania, Bulgaria, Gris. Taa bụ ihe oriri a na-ewu ewu, nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla maara banyere ya. N'isiokwu a, anyị ga-ekwukwa banyere uru bara uru na ihe caloric nke ose na-acha akwụkwọ ndụ, yana abamuru ya na nsogbu nke ahụ.
Obere ose: uru na nsogbu
Oge okpomọkụ bụ oge dị ịtụnanya mgbe akwụkwọ nri ọhụrụ chara chara, jupụtara na uru, uto na nsị nke ọtụtụ agba. Ihe na-acha ụtọ, akwụkwọ ụtọ: acha ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, oroma, odo na ọbụna odo odo na-emepụta menu ma mee ka efere dị mma, bara uru, na-enye ha otu uto na ọdịdị mma.
Kedu ka esi eto osisi nke Bulgarian ose na Urals: ndụmọdụ bara uru sitere n'aka agronomists
A na-eji mpaghara nke ọnọdụ ihu igwe ọ bụla mara mpaghara ọ bụla maka ripening akwụkwọ nri. Ogologo oge gara aga, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe ka ọ bụrụ na ị na-eto na Urals a na ose na Bulgarian. Ma site na mmepe nke uzu ugbo na umu ozuzu, nke a abiala. Otú ọ dị, iji nweta ezigbo ihe ubi nke ose, ọ dị mkpa ịmalite ịkwadebe maka akuku ya kemgbe oyi.
Esi esi kpoo ose na Armenia maka oyi
Mba ọ bụla nwere usoro nchịkọta nke canning nke oge ya. Dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ nri, ma ọ bụ paprika. Ezi ntụziaka ndị a nile na-adịgasị iche n'etiti onwe ha site n'ọtụtụ ngwaahịa, nakwa site na ngwa nri na ngwa nri. Ọ dịghị ihe ọzọ bụ nri Armenia, ebe nri ya dị nkọ ma dị mma.
Na-ede akwụkwọ na-ekpo ọkụ maka oge oyi: ihe kachasị mma maka ezinụlọ gị
Chillies, oseose ma ọ bụ ilu - ihe nile gbasara otu akwukwo nri, banyere ose. Ọ dị mma ma asịrị na dịka efere dị iche iche. Ma ọ bara uru, ya mere, ị pụghị ịtụ ụjọ iji nwayọọ mee onwe gị nkọ. Kedu ihe oriri dị mma na ihe dị mma iji sie ya nri - chọpụta nke ọzọ. Nkowa banyere uru nke na-ekpo ọkụ na-ede ede Ngwaahịa ahụ na-atọ ụtọ na ọ bụ n'ihi na ọnụnọ capsaicin ke alkaloid.
Bulgarian ose maka oyi: otu esi ghaa osisi ihe oriri
Akwukwo Bulgarian a kwadebere ga-eme ka ọ ghara idozi okpokoro ọ bụla, kama ọ ga-ewerekwa ọnọdụ nke nsọpụrụ kachasị ụtọ. Ọ bụ ọtụtụ ndị na-esi nri na-ewere ihe ndị na-emepụta nri iji mepụta ihe ndị dị mma. Ya mere, ka anyị chọpụta otú e si akwadebe ihe oriri a maka oge oyi, iji nweta ngwa ngwa ma dị ụtọ.
Kedu ka esi tichaa ụtọ Bulgarian ose maka oyi: nzọụkwụ site nzọụkwụ nzọụkwụ na foto
Akwukwo Bulgarian na-etinye n'ime ndepụta nke akwụkwọ nri ndị bara uru n'ihi nnukwu ego nke ascorbic acid dị na ngwugwu. Nri akwukwo nri a di omimi na ozo di iche iche eji eme ya: a na eri ya ohuru, ghaa ya, e ghere eghe, nke a na-egbute maka oyi. Anyị ga-ekwu banyere otu n'ime ụzọ nke oyi canning akwụkwọ nri, ya bụ pickling, taa.
Esi mechie ose maka nri maka oyi: Ezi ntụziaka na foto
Ihe oriri a na-etinye na ose bụ otu n'ime nri ndị a kasị ewu ewu ma na-ewu ewu na mba anyị n'oge oyi. Otú ọ dị, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ị nweta akwụkwọ ọhụrụ, nke dị elu na nke dị ụtọ na ọnụ ọnụ ọnụahịa n'oge oyi. N'okwu a, ngwọta kachasị mma ga-ewe ihe ubi maka oge oyi. Ntughari nri dị mfe ma ga-adị ike, ọbụlagodi na ị nweghị ahụmahụ na blanks.
Otu esi edozi akwukwo edere nke Bulgarian maka oyi: nzoghari uzo na ihe eji eme ihe
N'a oyi oyi, ọ dị mma ịmeghe ite nke ebe a na-echekwa ụlọ ma na-enwe obi uto, na-echeta oge okpomọkụ. Otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị mma maka oge oyi bụ ụtọ ose Bulgarian, anụ ya na-eme ka njupụta ya ma jiri nwayọọ nwayọọ na-adọrọ. Ihe kachasị ewu ewu bụ ịghacha akwụkwọ nri ndị a ṅara n'ọkụ na marinade, a na-echekwa nchebe dị otú ahụ ma nwee ọkụ na-esi ísì ụtọ na ihe ụtọ dị ụtọ, na mkpịsị anụ ahụ na-ejide ya.
Nhọrọ maka ichekwa ose ọkụ maka oyi, ntụziaka
Ọ bụrụ na ị na-agwụ ike site na nkwadebe nke oyi n'oge oyi nke cucumbers, tomato na lecho, anyị na-atụ aro ị gbalịa canning ma na-ekpo ọkụ na-ede ede. Nhọrọ maka nhazi ya. Ha, obi abụọ adịghịkwa ya, na-emegharị menu gị n'oge oyi, ma jiri vitamin ndị dị mkpa nye ya nri. Na ụfọdụ n'ime ha, ihe kacha amasị ma dị ụtọ, anyị ga-ewebata gị n'isiokwu a.